Nge-19 ka-Agasti zodiac-Ubuntu obupheleleyo beHoroscope - Imiqondiso Yeenkwenkwezi
Eyona Imiqondiso Yeenkwenkwezi Nge-19 ka-Agasti zodiac nguLeo-Ubuntu obupheleleyo beHososcope
Nge-19 ka-Agasti zodiac nguLeo-Ubuntu obupheleleyo beHososcope
Umqondiso we-zodiac ka-Agasti 19 ngu-Leo.
Uphawu lweenkwenkwezi: Ingonyama. Inkqubo ye- uphawu lweNgonyama Ichaphazela abantu abazalwe phakathi kukaJulayi 23 no-Agasti 22, xa kubuchwephesha benkwenkwezi yelanga kuthathwa njengeLanga kuLeo. Ibhekisa kwicala lobungangamsha nokuxhobisa aba bantu.
Inkqubo ye- Leo Constellation yenye yeenkwenkwezi ezilishumi elinambini ze-zodiac kwaye ilele phakathi kweCancer ukuya eNtshona kunye neVirgo eseMpuma. Inkwenkwezi eqaqambileyo ibizwa ngokuba nguAlfa Leonis. Eli qela lisasazekile kummandla wee-degrees ezingama-947 ze-square kwaye ligubungela ububanzi obubonakalayo phakathi kwe-90 ° kunye ne--65 °.
AmaGrike ayibiza ngokuba yiNemeaeus ngelixa ama-Italiya ekhetha eyabo i-Leone, nangona kunjalo imvelaphi yomqondiso we-zodiac ka-Agasti 19, iNgonyama, yiLatin Leo.
Uphawu olwahlukileyo: U-Aquarius. Kuthathelwa ingqalelo ukuba ubuhlakani balo naluphi na uhlobo phakathi kwabantu abasayina iLeo kunye neAquarius lelona lilungileyo kwizodiac kwaye baqaqambisa ubhetyebhetye kunye nobuchule.
Ukuziphatha: Kulungisiwe. Umgangatho utyhila ubume obunomdla babo bazalwa ngo-Agasti 19 kunye nomonde wabo kunye nemveliso ngokubhekisele kwiminyhadala yobomi.
Indlu elawulayo: Indlu yesihlanu . Le ndlu ifanekisela iziyolo zobomi kunye nobudlelwane boluntu. Le ndlu ikwanxulumene nabantwana kunye nokonwaba kwabo kunye namandla kwaye icebisa ukuba kutheni le nto inendima ebalulekileyo kubomi bukaLeos.
Umzimba olawulayo: Ilanga . Esi sijikelezi-langa sibonisa ubuqili kunye neentloni. Ikwacebisa icandelo lokonwaba. Ilanga likwabizwa ngokuba zizikhanyiso kunye neNyanga.
Isiqalelo: Umlilo . Eli nqaku libonisa uthando kunye namandla kwaye kuthathelwa ingqalelo njengokulawula abantu abanomdla kunye nabashushu abazalwe phantsi kwe-zodiac ka-Agasti 19. Umlilo ufumana intsingiselo entsha ngokunxibelelene nezinye izinto, ukwenza izinto zibile ngamanzi, ukufudumeza umoya kunye nomzekelo womhlaba.
Usuku lwethamsanqa: iCawe . U-Leo uchonga ngokuhamba kweCawe evuyayo ngelixa oku kuphindwe kabini kukudibana phakathi kweCawa kunye nokulawulwa kwayo liLanga.
Amanani anethamsanqa: 4, 6, 13, 14, 20.
Ulwazi oluthe kratya ngo-Agasti 19 Zodiac ngezantsi ▼
Igongqongqo le-Aries: Ingcinga eSebenzayo ye-Chinese Western Zodiac
INorth Node eLibra: Umphefumlo weejaji
loluphi uphawu lwe-zodiac ngoJulayi 29
capricorn umfazi kunye nendoda taurus
umhlaza oyindoda kunye nentombi
loluphi uphawu kuJan 27
Okthobha 21 ukuhambelana kweempawu zodiac